Fihaonan’i Meksika Amin’Izao Tontolo Izao Mandritra Ny Fetin’ny Kolontsaina Sakaiza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2016 7:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Italiano, polski, Español
Mandray ny Fetin'ny Kolontsaina Sakaiza natao hampifandray ity firenena iray ao Amerika Latina ity amin'ny firenena manakaiky ny 90 avy amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao indray i Zócalo ao an-drenivohitra meksikana. Nasaina manokana amin'ity lanonana ity i Lafrantsa.
Ho ela velona Lafrantsa, Ho ela velona Meksika ! @CulturasAmigas #FCA2016 araraoty !
Tonga eo amin'ny andiany fahafalo ny fety, araka ny voafariparitry ny mpitondra ao an-toerana misahana ny fikarakarana azy :
Mihoatra ny 200 ny hetsika arajavakanto sy kolontsaina nomanina hampiroboroboana ny fifanakalozana kolontsaina-maro, maoderina sy ahitana olona avy amin'ny fiaviana maro namaka tao an-drenivohitra, manomboka ny asabotsy 21 mey ka hatramin'ny 5 jona, rehefa tontosaina ao amin'ny Foibe Ara-Tantaran'ny Tanànan'i México ny Fetin'ny Kolontsaina namana (FCA) 2016.
Fa inona moa izany ny fihetsiketsehana atao ao? Tao amin'ny filazana ihany ny mpikarakara no namaly:
Amin'ny alalan'ny atrikasa, valandresaka, sombin-tsarimihetsika, fianarana teny frantsay, kilalao ho an'ny ankizy, fotoana fampiasam-batana sy fampisehoana hira, dihy ary tantara tsangana, tetikasa miditra amin'ny andiany fahavalo eo ambany fandrindran'ny manampahefanan'ny tanànan'i México.
Iray amin'ny fanintonan'ny fety ny mpitsidika isan-taona ny fahafaha-manandrana ny fahaiza-manao ara-nahandro iraisampirenena, ary fantatry ny mpiasan'ny Sekretarían'ny Fizahantany ny Tanànan'i México tsara izany ka izany no anasany ny olona amin'ny sary manaraka eto ambany :
Ny fetin'ny @CulturasAmigas miandry anao ao Zócalo fankalazan'izao tontolo izao ato amin'ny #CDMX [tanànan'i México] Firenena nasaina i Frantsa
Ao amin'ny stand an'i Fanjakana Mitambatra (Britanika), ahitana ny fahaizana manokan'ny isan-toerana :
Miandry anao izahay amin'ny Fetin'ny Kolontsaina Fanjakana Mitambatra (Britanika).
Ho an'ireo izay te-hahazo entambarotra avy amin'izao tontolo izao aorian'ny fety, manamarika izahay fa misy tolotra maro isan-karazany tsy lavitra an'i Zócalo, ao amin'ny Tsenan'i San Juan [mg].
Ny lanonana toy ny fetin'ny kolontsaina namana no ahafahan'ny mponin'ny tanànan'i México sy ny mpitsidika azy mitsipalotra ny feo, ny tsiro ary ny lokon'ny firenena lavitra ary nahoana moa, manangana fifandraisana.
Azerbaijan, Tanzania, Lybia ary i Repoblika Dominikana, sasantsasany amin'ireo firenena nanao fampirantiana tao amin'ny #FCA2016. Sary avy amin'ny mpanoratra.